A ga-arụ ọrụ Runple Triway maka oge mbụ na mpụga USA na ọdụ ụgbọ elu Istanbul! "| RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulA ga-arụ Ọrụ Runple Triple nke mbụ na mbụ na mpụga USA na ọdụ ụgbọ elu Istanbul! "
05 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, General, Ụlọ elu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
ọrụ ịgba ọsọ ga-eme n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul maka oge mbụ na mpụga ụwa
Hüseyin Keskin, onye isi njikwa nke ọdụ ụgbọ elu steeti (DHMİ) na Onye isi oche nke ndị isi oche, bụ ndị mere ule na ọdụ ụgbọ elu Atlanta, mere nyocha site na akaụntụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ banyere nleta ahụ.
Keskin, "Arụ ọrụ gbara ọsọ ugboro atọ na mpụga United States na nke mbụ n'ụwa, isi iyi nke nganga anyị ga-ewere ọnọdụ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul!"
Onye isi njikwa akaụntụ Twitter nke Keskin (@dhmihkeskin) na-ekerịta dịka:
Site na Ọrụ Nleta na Nchịkwa Square nke enyere na ọdụ ụgbọ elu Atlanta, nke nwere ebe a na-agba 5, ọdụ ụgbọ elu mbụ nwere ọnụ ọgụgụ ndị njem kacha elu n'ụwa, anyị mekwara nleta n'ọdụ ụgbọ elu n'Atlanta iji chọpụta ngwa ahụ na iwepụ ngwa ndị dị n'okporo ụzọ awara awara.
Anyị dechara nyocha anyị na Ngalaba Na-ahụ Maka Nweta na ụlọ elu Airportlọ Ọrụ Ebe Atụrụ Atlanta ma lee arụmọrụ dị n'okporo ụzọ na-aga n'ihu ebe a.
Mgbe nke a gasịrị, anyị gara MITER, nzukọ nyocha na mmepe nwere mmekọ na MIT na Washington, na-arụ ọrụ na ọdụ ikuku, usoro ịbịaru nso na usoro mkpọtụ na nyocha ihe ize ndụ n'ọtụtụ mba na-abụghị America dị ka Doha, Singapore, Dubai, Germany.
N'ebe a, anyị emeela nnwale nke anyị ga-eji nganga anya ọzọ site na iji aka anyị nke obodo na nke mba. Anyị arụ ọrụ na njikwa usoro nyocha, nke ọ bụla n'ime ha bụ akwụkwọ mmụta doctoral, iji mee ka ikike nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul anyị rụọ ọrụ kachasị arụmọrụ.
Site na ọrụ ụzọ atọ anyị na-agba n'okporo ụzọ atọ, MITER, otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a na-akwanyere ùgwù n'ụwa, nwetara akara zuru oke.
A ga-eme n'okporo ụzọ awara awara ugboro atọ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul, isi mmalite anyị bụ nke mbụ n'ụwa na mpụga United States!
Triple Track Ngwa ka Deba aha na Turkey mgbe US 15 / 10 / 2019 M. Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, kwuru na ha na-eme atụmatụ maka ọdịnihu iji bulie ike na iwepụ ọdụ ụgbọ elu Istanbul.
Njem nke atọ n'ọdụ ụgbọ mmiri Istanbul na-ewu ...! 11 / 07 / 2019 Owuwu nke uzo mbu nke ato nke onwe ha n’ọdụ ugbo elu nke Istanbul, nke mejuputara uzo anọ ma buru nke kachasị n’uwa n’ụwa mgbe emechara ọkwa niile, na-aga n’ihu. Site n'okporo ụzọ gbalaga emebere ka arụ ọrụ na ọkara nke abụọ nke 2020…
Ụzọ ụgbọ mmiri mbụ pụtara na ọdụ ụgbọ elu nke atọ 06 / 10 / 2016 Wayzọ mbu ya pụtara na ọdụ ụgbọ elu nke atọ: Ọrụ ndị a na-eme n'okporo ụzọ awara awara nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul (INA), nke na-arụ ọrụ na oke ọsọ yana onye arụchara 30, si na ikuku. Mgbe dechara, Turkey bụ ụwa kasị ...
Uzo nke Metro Ankara ga-ewere ọnọdụ n'oge a choro 21 / 07 / 2013 Mmeghe nke Ankara Metro ga-eme n’ụbọchị a ga-eme atụmatụ ya: Metin Tahan, osote onye isi njikwa akụ na ụba nke Ministry of Transport, Maritime Affairs na Nkwukọrịta, “29, nke bụ ụbọchị mmeghe nke Marmaray, dị njikere maka ahịrị Batıkent-Sincan na Kızılay-Çayyolu na Ọktoba…
Ankara-Istanbul High Speed ​​Train mmalite ụbọchị ga-emezu 07 / 11 / 2012 Minista Yıldırım si na thelọ okporo ụzọ Ankara-Istanbul High-Speed ​​Train, Osmaneli High-Speed ​​Train Construction Site, ụlọ ọrụ nkwekọrịta ahụ kwuru nkwupụta nye ndị nta akụkọ mgbe nkenke nke ndị isi gasịrị. "Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Project na Marmaray Project aylık
Inye oru n ’ulo ogwu n'efu na Bismil
Okporo ụzọ Bursa “6. Eker M Gbaa oso ”Mbido! .. Uzo Ga-emechi
Uzo nke Metro Ankara ga-ewere ọnọdụ n'oge a choro
Ankara-Istanbul High Speed ​​Train mmalite ụbọchị ga-emezu
Eurasia Rail ga-enwe na Istanbul
Ihe ngosi International na Ụlọ Nzukọ Alaeze ga-ewere ọnọdụ na 05-08 February 2013 na Las Vegas, USA
Akwụkwọ ụbọchị Kadıköy ga-ewere ọnọdụ na Haydarpaşa Station
Ụgbọ elu ụgbọ elu 3 n'etiti Adana na Doha